विश्वकपः भारतविरुद्ध श्रीलंकाले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मोका? - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपः भारतविरुद्ध श्रीलंकाले टस जित्यो, टिममा को–कोले पाए मोका?
काठमाडौं, असार २१ । आइसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत भारत विरुद्धको खेलमा श्रीलंकाले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । सेमिफाइनल दौडबाट बाहिरिसकेको श्रीलंका सुखत अन्त्यका साथ मैदान उत्रिएको छ । भारतले भने अन्तिम ४ मा स्थान बनाउन सफल भएको छ । आज श्रीलंकालाई हराउन सके भारत अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिने छ ।
श्रीलंकाको प्लेइङ–११ः दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), कुसल परेरा, कुसल मेन्डिस, धनन्जय डी सिल्वा, अविष्का फर्नांडो, लसिथ मलिंगा, एन्जेलो म्याथ्युज, थिसरा परेरा, लाहिरू थिरिमाने, इसुरू उडाना र कसुन रजिथा
ट्याग्स: Sri LankaVs India